Ndingadzidzisa Sei Hana Yangu? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Douala Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Ibanag Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingadzidzisa Sei Hana Yangu?
Hana yako ingafananidzwa nechii pazvinhu zvinotevera?
Mhinduro ndeyekuti zvese zviri 4. Nyaya ino ichatsanangura kuti sei zvakadaro.
Chii chinonzi hana?
Nei uchifanira kudzidzisa hana yako?
Ungadzidzisa sei hana yako?
Hana inokubatsira kusiyanisa chakanaka nechakaipa. Bhaibheri rinoti yakafanana ‘nemutemo wakanyorwa mumwoyo.’ (VaRoma 2:15) Hana yakanaka inokubatsira kuti unyatsoongorora chinhu chauri kuda kuita kana kuti chawakatoita kare.
Hana yako yakafanana nekambasi. Inokutungamirira munzira yakarurama kuti usapinda muna taisireva.
Hana yako yakaita segirazi. Inoratidza tsika dzako, kuti uri munhu akaita sei nechemukati.
Hana yako yakaita seshamwari yakanaka. Inogona kukupa yambiro yekubatsira kuti ubudirire kana ukaiteerera.
Hana yako yakaita semutongi. Inokutongesa kana paine chimwe chinhu chakaipa chawaita.
Hana yakanaka inokubatsira kuita zvisarudzo zvakanaka
Pfungwa inokosha: Hana yako chinhu chinokosha chaizvo pakukubatsira (1) kusarudza nekuchenjera uye (2) kugadzirisa zvaunenge wakanganisa.
Bhaibheri rinotiudza kuti “rambai muine hana yakanaka.” (1 Petro 3:16) Izvozvo zvakaoma kana hana yako isina kumbodzidziswa.
“Ndainyepera vabereki vangu nezvekwandaienda uye ndaisambovaudza. Hana yangu yakambotanga ichindinetsa, asi nekufamba kwenguva ndakanga ndisisaoni chakaipa pane zvandaiita.”—Jennifer.
Asi hana yaJennifer yakazomuita kuti audze vabereki vake zvaaiita uye kuti arege kuvanyengedza.
Zvekufunga nezvazvo: Ndiriini paifanira kunge pakarova hana yaJennifer?
“Zvakaoma uye zvinotoshungurudza kurarama uchida kuvanza kamwe kaupenyu kaunenge uchirarama. Kana hana yako ikakubvumira kuita chisarudzo chakaipa zvinenge zvatova nyore kuti uitezve chimwe chisarudzo chakaipa.”—Matthew.
Vamwe vanhu vanotorega zvachose kuteerera hana yavo. Bhaibheri rinoti havasisina “unhu zvachose.” (VaEfeso 4:19) Bhaibheri Rinoyera rinoti: “Havasisina nyadzi.”
Zvekufunga nezvazvo: Vanhu vasingazvipi mhosva yekuita zvakaipa, vanorarama upenyu huri nani here? Vanopedzisira vapinda mumatambudziko akaita sei?
Pfungwa inokosha: Kuti urambe uine hana isingakupi mhosva, unofanira kunge uine ‘simba rekunzwisisa rakadzidziswa kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa.’—VaHebheru 5:14.
Kuti udzidzise hana yako unofanira kunge uchiziva zvaunofanira kuita nezvausingafaniri kuita. Vamwe vanoita izvi nekutarisa:
zvinoitwa nemhuri yavo kana kuti patsika dzavo
zvinoitwa nevezera ravo
zvinoitwa nevanhu vakakurumbira
Zvisinei, zvinotaurwa neBhaibheri kuti ndiwo mararamiro atinofanira kuita ndizvo zvine musoro. Izvozvo hazvitishamisi nekuti Bhaibheri ‘rakafemerwa naMwari’ uyo akatisika uye anoziva zvatinoda uye zvakatinakira.—2 Timoti 3:16.
Chimbofunga mienzaniso inotevera.
ZVINOFANIRA KUITWA: “[Tinoda] kuva vakatendeseka pazvinhu zvese zvatinoita.”—VaHebheru 13:18.
Pfungwa iyi ingakubatsira sei kana wava kuda kubiridzira pabvunzo, kunyepera vabereki vako, kana kuti kuba?
Kana hana yako ikaita kuti uve akatendeseka pazvinhu zvese, unofunga kuti izvozvo zvichakubatsira sei mune remangwana?
ZVINOFANIRA KUITWA: “Tizai upombwe.”—1 VaKorinde 6:18.
Pfungwa iyi ingabatsira sei hana yako kana ukapinda pamuedzo wekuona zvinonyadzisira kana kuti wekuita zvepabonde iwe usati waroora kana kuroorwa?
Kana hana yako ikaita kuti utize upombwe, izvozvo zvichakubatsira sei iye zvino uye mune remangwana?
ZVINOFANIRA KUITWA: “Itiranai mutsa, muchinzwirana tsitsi kwazvo, muchiregererana nemwoyo wese.”—VaEfeso 4:32.
Pfungwa iyi ingakubatsira sei kana ukatadza kuwirirana nemunin’ina, mukoma kana hanzvadzi yako kana kuti neshamwari?
Kana hana yako ikaita kuti uve nemutsa nekunzwira tsitsi, zvichakubatsira sei iye zvino uye mune remangwana?
ZVINOFANIRA KUITWA: “Jehovha . . . anovenga munhu wese anoda zvemhirizhonga.”—Pisarema 11:5.
Pfungwa iyi ichakubatsira sei pakusarudza mafirimu, mapurogiramu epaTV uye mavideo game?
Kana hana yako ikakubatsira kuti urege varaidzo yekurwisana, izvozvo zvichakubatsira sei iye zvino uye mune remangwana?
NYAYA YAKAITIKA: “Ini neshamwari dzangu taitamba mavideo game ekurwisana. Asi baba vangu vakazondiudza kuti ndisaatamba. Saka ndaingoatamba pandaishanyira shamwari dzangu. Pandaidzoka kumba ndaisambozviti bufu. Baba vangu vaindibvunza kana paine chaindinetsa asi ndaivati pakanga pasina. Asi mumwe musi ndakaverenga Pisarema 11:5 ndikabva ndatanga kunetseka nezvandaiita. Ndakaona kuti ndaifanira kurega kutamba mavideo game iwayo. Iye zvino handichaatambi. Imwe shamwari yangu, yaona zvandakanga ndaita, yakatsidzawo kuti yaisazotamba magemhu ekurwisana.”—Jeremy.
Zvekufunga nezvazvo: Hana yaJeremy yakatanga kushanda papi, uye ndepapi paakatanga kuiteerera? Unodzidzei pane zvakaitika kuna Jeremy?
Pfungwa inokosha: Hana yako inoratidza zvauri uye zvinhu zvaunokoshesa. Hana yako inoratidza kuti uri munhu akaita sei?
“Kunyange kana hana yedu ichiziva zvakanaka nezvakaipa, izvozvo hazvirevi kuti tichaita zvinhu zvakanaka. Kana kambasi ichishanda zvakanaka ichitiratidza kwatinofanira kufamba takananga, zvinongosarira kwauri kuti utevedzere zvairi kukuudza.”—Alexis.
“Hana haisi fenzi inokudzivirira. Inzira inokuratidza kwaunofanira kuenda. Hana yako inoita semasaini ari mumugwagwa ayo anokuchengetedza panjodzi dzinenge dziri mberi.”—Lionel.
“Handibvumiri kuti nditungamirirwe nehana yemumwe munhu. Ndakadzidzisa hana yangu, zvekuti chero chainondiudza ndinoziva kuti chinofanira kunge chakanaka. Handifaniri kuchinja zvandiri ndichiitira kuti ndifaririrwe nevamwe.”—Isabella.
Kudzokorora: Ndingadzidzisa sei hana yangu?
Funga zvakanakira mitemo iri muBhaibheri yekuva netsika. Bhaibheri rakafemerwa naMwari, uyo akatisika uye anoziva zvinhu zvakanyanya kutinakira.
Ongorora kuti hana yako inoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri here. Zvii zvaungaita kuti uratidze kuti mafungiro ako anoenderana neaMwari?
Ita zvinotaurwa neBhaibheri. Kuziva kwaunoita Bhaibheri ngakukubatsire pazvisarudzo zvaunoita zuva nezuva.
Vanhu vasina kutendeseka havasi ivo vanowanzobudirira here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingadzidzisa Sei Hana Yangu?
ijwyp nyaya 99